मनोरञ्जन Archives - Kanchan Post
सारेगमप लिटिल च्याम्पको उपाधी झापाकी कृपालाई, दोस्रो स्थानमा झापाकै रोशा
झापा । गायन रियालिटि सो सारेगमप लिटिल च्याम्प नेपालको उपाधी झापाकी कृपा पौडेलले जितेकी छिन् । झापा बिर्तामोडकी १४ बर्षीया कृपाले हिजो सम्पन्न सारेगमप फाइनलमा उपाधी जितेकी हुन् । ग्यालेक्सी फोर के टेलिभिजनमा विगत १८ हप्तादेखि प्रसारण भइरहेको सारेगमपको हिजो राति सम्पन्न भएको फाइनलमा अन्य चार प्रतिस्पर्धीलाई उछिन्दै कृपाले उपाधी जित्न सफल भएकी हुन् । त्यस्तै प्रतियोगिताको दो...
‘सारेगमप लिटिल च्याम्प्स’ को फाईनलमा झापाकी रोशा र कृपा
दमक : नेपालको चर्चित रियालिटि सो ‘सारेगमप लिटिल च्याम्प्स’ को फाईनलमा झापाकी दुई चेली पुग्न सफल भएका छन् । झापाका १४ वर्षीय प्रतियोगीद्वय कृपा पौडेल र रोशा फुयाँल सारेगमपको उपाधि नजिक पुगेका हुन् । प्रतियोगितामा लगातार धमाका मच्चाइरहेका झापाली चेली रोशा फुयाल र कृपा पौडेल प्रतियोगिताको फाइनलमा पुग्न सफल भएका हुन् । रोशा मेचीनगर र कृपा विर्तामोड निवासी हुन् । हरेक शुक...
द भ्वाइस अफ किड्सको उपाधि टिम प्रमोदका जेनिश उप्रेतीलाई
झापा : सुमधुर स्वरका धनी जेनिश उप्रेतीले हिमालय टेलिभिजनबाट प्रशारण भईरहेको नेपालकै चर्चित रियालिटी सो द भ्वाइस अफ किड्सको उपाधि जितेका छन्। भर्खरैं सम्पन्न द भ्वाइस अफ किड्स सिजन वानको फाईनल स्पर्धामा जेनिशले उपाधि चुमेका हुन्। सिजन वानमा दमदार प्रस्तुति दिदै दर्शक तथा कोचको मन जित्दै आएका मकवानपुरे जेनिस उप्रेती उत्कृष्ट ८ मा पर्न सफल भएका थिए । दर्शकको भोटको आधारमा टिम...
झापाको काकरभिट्टाबाट सप्तरंग-३ यात्रा सुरु ; २४ गते कुन कुन कलाकार आउछन त झापा ?
झापा : सातै प्रदेशमा ‘सप्तरंग-३’काे आयाेजना हुने भएको छ । सोमबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा आयोजक गृष्मा ब्रोर्डकास्टिङले ‘सप्तरंग-३’ हुने जानकारी गराएको हो । गृष्मा ब्रोर्डकास्टिङले आयोजना गर्न लागेको ‘सप्तरंग-३’ ले सातै प्रदेशमा जोडिएर कलाकारको सहकार्यमा सचेतना फैलाउने छ । ‘सातै प्रदेशमा रहेका जनतालाई, जनताद्वारा, जनताको निम्ति भन्ने भनाइलाई जनमानसमा कलामार्फत् प्रष्टाउन...
झापाको कमल ४ किराँत चौकमा ‘गायक सिद्धान्त खड्का लाइभ कन्सर्ट’ हुदैं
केर्खा, १५ मंसिर– चर्चित रियालिटो शो नेपाल स्ट्रारमा पावर प्याक प्रफमरबाट परिचित झापा केर्खाका गायक सिद्धान्त खड्काको सांगीतिक प्रस्तुती हुने भएको छ । गायक सिद्धान्त खड्का लाइभ कन्सर्टमा कमल गाउँपालिका वडाँ नं ४ किरात चौकमा मंसिर १७ गते शुक्रबार साँझ सम्पन्न हुने सांगीतिक कार्यक्रमलाई नवज्योति सयपत्री क्लबले आयोजना गरेको हो । गायक खड्का चर्चित रियालिटो शो नेपाल स्ट्रारमा टप ...
झापा : पुर्वमा रहेर नै कला क्षेत्रमा संघर्ष गर्दै गरेका झापाली कलाकार भुवन खड्का यति वेला निर्माताहरुको आँखामा पर्न थालेका छन। हुन त खड्का एक कलाकार मात्र हैन्न उनि एक कुसल व्यावसायि समेत चिनिने गरेका छन । उनको विगत एक दशक देखि सुर्यदय इलेक्ट्रोनिक पसल सन्चालनमा रहेको छ। उनी एक सामाजिक व्यक्ति समेत रहेका छन उनी विभिन्न संघ संस्थामा जिम्मेवार पक्ष समेत सम्हालीरहेका छन।...
इटहरी । शनिबार इटहरी काे इलाइट सिनेमा हलमा ७० बर्षिय शान्ता पाठककाे आखामा आशु थियाे । चलचित्र रिभेन्स हेरेपछि उनकाे आँखा भरी आँसु देखेपछि हामीले साेध्याै आमा किन आखामा आँसु ? उहाकाे जवाफ थियाे नेपाली छाेरी चेलि यसरी नै बिदेशमा बेचिदै छन । साच्चै सत्य घटनाको फिल्म आज हेर्न पाए । अब चाहिँ सचेत हुन्छन कि उहाकाे जवाफ थियोे । चलचित्र रिभेन्सकाे बिशेष साे पुर्वकाे इटहरीमा भएको ...
झापा । नेपालको चर्चित रियालिटि सो सारेगम लिटिल च्यापियनमा उत्कृष्ट प्रस्तुति दिइरहेकी झापा मेचीनगर–८ की रोशा फुयाल उत्कृष्ट १४ मा पर्न सफल भएकी छिन् । सुमधुर आवाजको कारण अडिसनदेखि अब्बल प्रतिष्पर्धिको रुपमा परिचित रोशा यतिखेर टप १५ बाट १४ मा पुगेकी हुन । हरेक शुक्रवार र शनिवार ग्यालेक्सी फोरके टिभीबाट प्रशारण हुदै आएको यस गायन प्रतियोगितामा हाल रोशा भोटिङ राउण्डको चरणमा छिन्...
सारेगम लिटिल च्यापियनमा झापा मेचीनगरकी रोशालाई भोट गर्न आग्रह
झापा। नेपालको चर्चित रियालिटि सो सारेगम लिटिल च्यापियनमा उत्कृष्ट प्रस्तुति दिएर आम दर्शकमाझ प्रिय बन्दै गइरहेकी छिन् रोशा फुयाल । सुधुर आवाजको कारण अडिसनदेखि नंै अब्बल प्रतिष्पर्धिको रुपमा परिचित रोशा यतिखेर टप पन्द्रबामट भोटिङ राउण्डको चरणमा छिन् । जादुमय आवाजका कारण सर्वप्रिय बनेकी रोशालाई सारेगम लिटिल च्यापियन बन्न अब जनमतको खाँचो छ । त्यसैले उनको समर्थनमा अहिले झापा सहि...